अब कात्तिक ३ मा अनमोलको ‘कृ’, कस्तो होला ‘स्टार वार’ ? « Ramailo छ
अब कात्तिक ३ मा अनमोलको ‘कृ’, कस्तो होला ‘स्टार वार’ ?
अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ को प्रदर्शन मिति कात्तिक ३ गतेलाई सारिएको छ । भदौ ८ पछि असोज ११ गते प्रदर्शनमा ल्याउने भनिएको भुवन केसी र सुवास गिरी निर्मित ‘कृ’ अब भने कात्तिक ३ गते प्रदर्शनमा ल्याइने निर्माता केसीले जानकारी गराएका छन् । सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरिरहेको फिल्मको हालसम्म पैतालिस प्रतिशत छायाँकन सकिएको छ ।
‘कृ’ ले नयाँ प्रदर्शन मिति तोकेसँगै कात्तिक ३, लक्ष्मी पूजाको दिनमा तीन स्टारहरु बिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । रेखा थाप, आर्यन सिग्देल, अनमोल बिचको प्रतिस्पर्धा रोचक र रमाइलो हुने देखिएको छ । सात वर्ष पछि कम व्याक भएका रेखा र आर्यनको फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ को हाल छायाँकन भैरहेको छ । सुदिप बबी भूपाल सिंहले निर्देशन गर्दै गरेको फिल्मको छायाँकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कस्तो होला कात्तिक ३ गते तीन स्टारहरु बिचको प्रतिस्पर्धा ? दुई पटक सारिएको अनमोलको ‘कृ’ लक्ष्मी पूजामै आएको खण्डमा रेखाले आफ्नो फिल्मको प्रदर्शन मिति परिवर्तन गर्लिन् ? यदि दुवै फिल्म एकसाथ प्रदर्शनमा आए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कस्तो होला ? ‘कृ’ को नयाँ प्रदर्शन मिति तोकिएसँगै यी र यस्तै खाले प्रश्नहरु सृजना भएका छन् ।